Offical Trailer ထွက်ရှိလာပြီဖြစ်တဲ့ “To All the Boys: P.S. I Still Love You” – Trend.com.mm
Offical Trailer ထွက်ရှိလာပြီဖြစ်တဲ့ “To All the Boys: P.S. I Still Love You”
Posted on December 23, 2019 by Noel
‘To All the Boys I’ve Loved Before’ ဇာတ်ကားလေးဟာ ၂၀၁၈ တုန်းကထွက်ရှိခဲ့ပြီး
လူငယ်ပရိသတ်တွေကြားထဲမှာ အထူးရေပန်းစားကျော်ကြားခဲ့တဲ့ အချစ်ဇာတ်ကားလေးဖြစ်ပါတယ်။အခုတော့ စီးရီးအဖြစ် ဒုတိယပိုင်းဆက်ပြီးထွက်ရှိလာခဲ့ပါပြီ။
အခု ၂၀၂၀ ဖေဖော်ဝါရီလထဲမှာထွက်ရှိလာမယ့် To All the Boys: P.S. I Still Love You ဇာတ်ကားမှာတော့ Lana Condor ၊Noah Centineo ၊ Janel Parrish ၊ Anna Cathcart ၊ Trezzo Mahoro ၊ Madeleine Arthur ၊ Emilija Baranac ၊Kelcey Mawema ၊ Jordan Fisher ၊ Ross Butler ၊ Holland Taylor ၊ Sarayu Blue နဲ့ John Corbett တို့အဓိကပါဝင်သရုပ်ဆောင်ထားပါတယ်။
ဒီဇာတ်ကားဟာဆိုရင် စာရေးဆရာမ Jenny Han ရဲ့ ၂၀၁၅ တုန်းက ၀တ္ထုစာအုပ် P.S. I Still Love You ကို အခြေခံပြီးရိုက်ကူးထားတာပါ။ဇာတ်လမ်းပုံစံလေးက ကိုယ်ကြိတ်သဘောကျနေရတဲ့ကောင်လေးတွေအတွက် ရေးထားတဲ့စာတွေကို ညီမဖြစ်သူက တွေ့သွားပြီး
ဘယ်သူနဲ့ဖူးစာပါပြီး တကယ်လက်တွဲသွားနိုင်မလဲ၊ဒါမှမဟုတ် To All the Boys I’ve Loved Before3ထွက်ရှိလာဦးမလားဆိုတာတွေကိုတော့ ပရိသတ်တွေက ဖေဖော်ဝါရီ ၁၂ ရက်နေ့ဆိုရင်ကြည့်ရှုခံစားရတော့မှာဖြစ်ပါတယ်။
အခု အကြိုခံစားနိုင်အောင် Trailer လေး ပြန်လည်ဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်။
Song-Song စုံတွဲ ပြန်အဆင်ပြေသွားကြပြီလား??